ဦးဆောင် dmx အလင်း > floodlight ဦးဆောင် > 108W 216W Square ကိုရေလွှမ်းမိုးသော LED lisht
Karnar catalog >>>> အွန်လိုင်းအမြင် .zip ကို download လုပ်ပါ
ကုန်ပစ္စည်းရေးစင်တာ | ကုန်ပစ္စည်းလက်မှတ် | ကိုယ်တို့အကြောင်း | ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ | အတိုကောက်အဘိဓါန်
သည်အခြားမော်ဒယ်များ View >>
1. 250W 500W Square ကိုရေစိုခံ IP65 DMX RGB သို့မဟုတ်တည်ငြိမ် LWW-10 LED မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်
2. 220W Square ကိုရေစိုခံ IP65 DMX RGB သို့မဟုတ်တည်ငြိမ် LWW-9 LED မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်
3. 155W Square ကိုရေစိုခံ IP65 DMX RGB သို့မဟုတ်တည်ငြိမ် LWW-8 LED မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်
4. 108W 216W Square ကိုရေစိုခံ IP65 DMX RGB သို့မဟုတ်တည်ငြိမ် LWW-7 LED မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်
5. 25W 48W Square ကိုရေစိုခံ IP65 DMX RGB သို့မဟုတ်တည်ငြိမ် LWW-6 LED မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်
6. 26W 32W 48W Linear ရေစိုခံ IP65 DMX RGB သို့မဟုတ်တည်ငြိမ် LWW-5 LED မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်
7. 40W 80W 90W Linear ရေစိုခံ IP65 DMX RGB သို့မဟုတ်တည်ငြိမ် LWW-4 LED မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်
8. 26W 48W Linear IP20 DMX RGB သို့မဟုတ်တည်ငြိမ် LWW-3 LED မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်
9. 96W 192W Linear ရေစိုခံ IP65 DMX RGB သို့မဟုတ်တည်ငြိမ် LWW-2 LED မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်
10. 15W 25W 48W Linear ရေစိုခံ IP65 DMX RGB သို့မဟုတ်တည်ငြိမ် LWW-1 LED မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်
108W 216W Square ကိုရေစိုခံ IP65 DMX RGB သို့မဟုတ်တည်ငြိမ် LWW-7 LED မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်. ( 108W 216W Square ကိုရေစိုခံ IP65 DMX RGB သို့မဟုတ်တည်ငြိမ် LWW-7 LED မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော် )
108W 216W Square ကိုရေစိုခံ IP65 DMX RGB သို့မဟုတ်တည်ငြိမ် LWW-7 LED မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်
တရုတ်နိုင်ငံ floodlight ဦးဆောင် 108W 216W Square ကိုရေလွှမ်းမိုးသော LED lisht တင်ပို့သူ
တရုတ်လက္ကား, ကြိုးအလင်းဦးဆောင်အလင်း twinkle ဦးဆောင်သောအသားတင်အလင်းကိုဦးဆောင်, LED မီး, ကုလားကာအလင်းကိုဦးဆောင်, မြက်ခင်းအလင်း, နီယွန်ပြွန်, EL ဦးဆောင် Tree အလင်း, ရှားစောင်းပင်, ရော်ဘာ cable ကို, Led motif, မီးရှူးမီးပန်းများအလင်း, အုန်းစွန်ပလွံပင်အလင်း, ဦးဆောင် မီးသီးဦးဆောင်ဆီမီးခွက်ကိုဦးဆောင်, ဖိုင်ဘာ, controller, ဦးဆောင်ပြီးအလှဆင်အလင်း, ဦးဆောင်ပြီးကွင်းဆက်အလင်း, သစ်ပင်အလင်း
အဘို့အရင်းမြစ် floodlight ဦးဆောင် 108W 216W Square ကိုရေလွှမ်းမိုးသော LED lisht Guzhen မြို့, Zhongshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်မှာထုတ်လုပ်သူ
တစ်ထုတ်လုပ်သူ floodlight ဦးဆောင် 108W 216W Square ကိုရေလွှမ်းမိုးသော LED lisht Guzhen မြို့, Zhongshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်ထံမှ
တစ်ထုတ်လုပ်သူ floodlight ဦးဆောင် 108W 216W Square ကိုရေလွှမ်းမိုးသော LED lisht ဂွမ်ဒေါင်းတရုတ်မှာ။
အဆိုပါ featured တရုတ်ဂွမ်ဒေါင်း floodlight ဦးဆောင် 108W 216W Square ကိုရေလွှမ်းမိုးသော LED lisht ဤနေရာတွင်စာရင်းထုတ်လုပ်သူများနှင့် karnar အလင်းရောင်အားဖြင့်ရင်းမြစ်ထားတဲ့နေကြသည်။
ဤအုပ်စုတို့ပါဝင်သည်: floodlight ဦးဆောင် 108W 216W Square ကိုရေလွှမ်းမိုးသော LED lisht
အဘို့အရင်းမြစ် floodlight ဦးဆောင် 108W 216W Square ကိုရေလွှမ်းမိုးသော LED lisht
အဘို့အကုန်ပစ္စည်းများ floodlight ဦးဆောင် 108W 216W Square ကိုရေလွှမ်းမိုးသော LED lisht
တရုတ်နိုင်ငံ floodlight ဦးဆောင် 108W 216W Square ကိုရေလွှမ်းမိုးသော LED lisht လက္ကား
ZhongShan floodlight ဦးဆောင် 108W 216W Square ကိုရေလွှမ်းမိုးသော LED lisht တင်ပို့သူ
ZhongShan floodlight ဦးဆောင် 108W 216W Square ကိုရေလွှမ်းမိုးသော LED lisht လက္ကား
ZhongShan floodlight ဦးဆောင် 108W 216W Square ကိုရေလွှမ်းမိုးသော LED lisht ပေးသွင်းခြင်းနှင့်မီးခွက် LED, မီးသီး & ပြွန်, Diodes, အလိုအလျောက်အလင်းရောင်စနစ်, LED အလင်းရောင် LED, ဓာတ်မီး, အားလပ်ရက်အလင်းရောင်, downlights, လမ်းမီးလုံး, မျက်နှာကျက်မီးလုံး, မြို့ရိုးကိုမီးခွက်, ဥယျာဉ်တော်အလင်းအိမ်, ဓာတ်မီး & မီး, မျက်နှာကျက်မီးထိုး, LED မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်အလင်း LED , ရေလွှမ်းမိုးအလင်း LED pannel အလင်း LED, ပျော့ချွတ်အလင်း LED အလင်းကိုဆင်း LED, ဆွဲပြားအလင်း LED, မျက်နှာကျက်အလင်း LED, နီယွန်ပြွန် LED, မြေအောက်အလင်း, LED မီးခွက်သည် LED
ဂွမ်ဒေါင်း floodlight ဦးဆောင် 108W 216W Square ကိုရေလွှမ်းမိုးသော LED lisht ပေးသွင်းခြင်းနှင့်မီးခွက် LED, မီးသီး & ပြွန်, Diodes, အလိုအလျောက်အလင်းရောင်စနစ်, LED အလင်းရောင် LED, ဓာတ်မီး, အားလပ်ရက်အလင်းရောင်, downlights, လမ်းမီးလုံး, မျက်နှာကျက်မီးလုံး, မြို့ရိုးကိုမီးခွက်, ဥယျာဉ်တော်အလင်းအိမ်, ဓာတ်မီး & မီး, မျက်နှာကျက်မီးထိုး, LED မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်အလင်း LED , ရေလွှမ်းမိုးအလင်း LED pannel အလင်း LED, ပျော့ချွတ်အလင်း LED အလင်းကိုဆင်း LED, ဆွဲပြားအလင်း LED, မျက်နှာကျက်အလင်း LED, နီယွန်ပြွန် LED, မြေအောက်အလင်း, LED မီးခွက်သည် LED
Guzheng မြို့ floodlight ဦးဆောင် 108W 216W Square ကိုရေလွှမ်းမိုးသော LED lisht ပေးသွင်းခြင်းနှင့်မီးခွက် LED, မီးသီး & ပြွန်, Diodes, အလိုအလျောက်အလင်းရောင်စနစ်, LED အလင်းရောင် LED, ဓာတ်မီး, အားလပ်ရက်အလင်းရောင်, downlights, လမ်းမီးလုံး, မျက်နှာကျက်မီးလုံး, မြို့ရိုးကိုမီးခွက်, ဥယျာဉ်တော်အလင်းအိမ်, ဓာတ်မီး & မီး, မျက်နှာကျက်မီးထိုး, LED မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်အလင်း LED , ရေလွှမ်းမိုးအလင်း LED pannel အလင်း LED, ပျော့ချွတ်အလင်း LED အလင်းကိုဆင်း LED, ဆွဲပြားအလင်း LED, မျက်နှာကျက်အလင်း LED, နီယွန်ပြွန် LED, မြေအောက်အလင်း, LED မီးခွက်သည် LED
Guzhen မြို့ကနေအလင်း, ချွတ်အလင်းကိုဦးဆောင်, LED မျက်နှာကျက် LIGHT ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းခြင်းနှင့်စက်ရုံချ LED, Zhongshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်
ဦးဆောင်ဆီမီးခွက်, 3x1w, 3x3w, 3x5w, အလင်းရောင်ဦးဆောင်
ဦးဆောင် par64, တန်းတူအလင်းဇာတ်စင်အလင်း, အလင်းကိုဦးဆောင်
ကြိုးအလင်းကိုဦးဆောင်, motif ဦးဆောင်
ကြိုးအလင်းကိုဦးဆောင်, motif အလင်းကိုဦးဆောင်
တရုတ်အလင်းရောင်ဦးဆောင်, တရုတ်မြင့်မားသောတန်ခိုး, ဆီမီးခွက်, LED ကိုချ LIGHT ဦးဆောင်ချွတ်အလင်းကိုဦးဆောင်, Guzhen မြို့, Zhongshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်ထံမှမျက်နှာကျက် LIGHT LED
Guzhen မြို့, Zhongshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်ထံမှချ LED LIGHT ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းခြင်းနှင့်စက်ရုံ
, ဆီမီးခွက်အလင်းဦးဆောင်အလင်း, LED ကိုဆွဲပြား LIGHT ဦးဆောင်မျက်နှာကျက် LIGHT LED
နီယွန် Flex အလင်းကိုဦးဆောင်, အလင်းကိုဦးဆောင်
LED ကို soft အဝတ်တန်ဆာကိုချွတ် LIGHT, LED မီးနီယွန် Flex အလင်း, ဦးဆောင်ကြိုးအလင်း, နီယွန်ပြွန်အလင်းကိုဦးဆောင်, အလင်းကိုဦးဆောင်
dmx အလင်းကိုဦးဆောင်, dmx အလင်းအလင်းကိုဦးဆောင်
dmx controller ကိုဦးဆောင်, 512 controller ကို dmx
, အားကစားအလင်းဦးဆောင်အလင်းကိုဦးဆောင်, ဆီမီးခွက်ကိုဦးဆောင်
, မြက်ခင်းအလင်းဦးဆောင်အလင်းကိုဦးဆောင်, High-ပါဝါကိုဦးဆောင်
, သစ်ပင်အလင်းဦးဆောင်အလင်းကိုဦးဆောင်, ချယ်ရီအလင်းကိုဦးဆောင်
, ကြိုးအလင်းဦးဆောင် softlight ဦးဆောင်အလင်းကိုဦးဆောင်
par64 ဦးဆောင်သည်, ဦးဆောင်ဆီမီးခွက်ဆီမီးခွက်ကိုဦးဆောင်
LED pannel အလင်း
နှိမ့်ချ LED အလင်း
LED string ကိုအလင်း
LED ရော်ဘာ cable ကိုအလင်း
LED virtual reality အလင်း
ပါဝါကို plug ကို
©2005-2018 Karnar ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ဆိုက်ကိုမြေပုံ Last modified: June 05 2020 03:55:25.